300 ardey oo u fariistay imtixaanka deeqda waxbarasho ee Ciraaq | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Isniin, 20 October, 2014- Arday Soomaaliyeed oo tiradoodu gaareyso 316 soona dhameystay waxbarashada dugsiga sare, kuwaa oo kakala yimid gobalada dalka oo dhan ayaa waxa Maanta ay imtixaan u galeen deeq waxbarasho oo dowlada Ciraaq ay ugu tala gashay in ay Soomaaliya uga kaalmeyso dhanka waxbarasha, waxaana imtixaanka oo lagu qabtay Iskuulka Maxamuud Mire ee degmada Waaberi ee gobalka Banaadir kor-meeray wasiirka Hidahaha iyo tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed, ku xigeenkiisa iyo gudiga arimaha bulshada Baarlamaanka Soomaaliya.
Kahor inta aan imtixaanka loo fariisan waxaa ardada la hadlay agaasimaha guud ee wasaarada Hidaha iyo Tacliinta sare ee dowlada Federal-ka Soomaaliya, Ismaaciil Yuusuf Cusmaan, waxa uuna ardada ugu bishaareeyay in deeq waliba oo wax-barasho ee dowlada Soomaaliya ay hesho loo tartami doono cida imtixaanka ku guuleysatana ay heli doonto si looga fogaado eex iyo wax isdaba marin, isaga oo hoosta ka xariiqay in ardagii ku qanci waaya natiijada soo baxda warqadihiisa imtixaanka dib ay u sixi doonaan macalimiin uu ku kalsoonyahay shaqsiga cabanaya iyada oo ay goob joog ahaan doonaan waalidka ardaga iyo masuuliyiinta wasaarada.
Waxa uu sheegay in deeqdu isugu jirto under and post graduates, hasa yeeshee imtixaanka maanta la qaadayo uu yahay under graduate dhawaanna ay qaadi doonaan imtixaanka post graduate.
Intaa kadib ardadii ayaa waxa ay u fariisteen imtixaanka oo lagu gelayay shan maado, iyada oo arda waliba loo diyaariyay luuqadii uu wax kusoo bartay si uusan ugu jaha wareerin luuqad uusan garaneyn, waxaana si hufan u ilaalinayay imtixaanka macalimiin loo diyaariyay.
Wasiirka Hidaha Tacliinta sare ee Soomaaliya, Ducaale Aadan Maxamed oo ay wehliyaan wasiir kuxigeenka wasaarada, iyo gudiga arimaha bulshada baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxa ay kormeereen dhamaan fasalada imtixaanka lagu gelayay, waxaana wasiirka iyo wufuudii wehlineysay ay su’aalo ka weydiiyeen ardada sida ay imtixaanka u arkayeen iyaga oo sidoo kale ku dhiirri gelinayay dadaalka waxbarasho oo ay wadaan.
Wasiir ducaale iyo kuxigeenka gudoomiyaha gudiga arimaha bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya oo si wadajir ah shir jaraa’id ugu qabtay Iskuulka Maxamuud Mire kadib markii ay soo mareen fasalada dhan ayaa waxa si wada jir ah ugu mahadceliyeen dowlada Ciraaq oo iyadu bixisay deeqda waxbarasho ee ardadu imtixaaka u gelayaan iyo deeq waxbarasho oo iyana ah “post graduate” taas iyana ay ka faa’iideysan doonaan arday Soomaaliyeed.
“Waan u mahad celineynaa Dowlada Ciraaq oo iyada oo Colaad Heysato wali Soomaaliya la garab taagan caawimaad wax barasho. Waxaa imtixaan u fadhiya 316 arday oo kala yimid gobalada dalka. Sanadaha soo socda Imtixaanaadka gobalada ayaa lagu qaban doonaa. Ardada imtixaanka ku jirta waan u hanbalyeynayaa kuwa kale ee aan fursada u helinna dadaal ayaan ugu jirnaa”, Wasiir Ducaale ayaa u sheegay saxaafada.
Waxa uu u mahadceliyay gudiga arimaha bulshada baarlamaanka Soomaaliya oo uu sheegay in ay ka caawiyaan howsha ay umada Soomaaliyeed wasaaradu u heyso.
Gudoomiye ku-xigeenka arimaha bulshada Baarlamaakna Soomaaliya ayaa isna markiisa wax uu uga mahadceliyay dowlada Ciraaq Waxbarashada dhameeska tiran ee ardada Soomaaliyeed ugu deeqeen isaga oo hoosta ka xariiqay in deeqihii hore badankood ay ahaayeen kuwa aan dhameestirneyn oo ardagu uu jiifkiisa iyo cunadiisa iska bixinayay halka ardadaan Ciraaq u socda dhamaan tasiilaadkooda ay balan qaaday Dowladaasi.
Ardada imtixaanka gelayay qaarkood oo iyana dareenkooda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsanyihiin in ay tartan u galaan deeqda waxbarasho ee ay bixineyso dowlada Ciraaq.
Maxamed Abshir Cabdi Raxmaan oo kamid ah ardada maanta imtixaanka u fariisatay ayaa waxa uu yiri, “Maanta waxa aan u imaaday in aan imtixaankaan u fariisto si aan uga faa’iideesto waxbarasha dowlada Ciraaq nagu deeqday. Hadii aan ku guuleesto waxa aan ku reja weynahay in aan si wacan wax usoo barto si aan dalkeyga iyo dadkeyga u anfaco”.
Bishii July ee sanadkaan ayaa imtixaan nuucaan oo kale ah waxaa qaaday wasaarada Hidaha iyo tacliinta sare kadib markii Deeq waxbarasho dowladu ka heshay Yemen iyo Sudan, waxaana imtixaanka maanta uu ahaa kii labaad ee sanadkaan gudihiisa laga qaado arday Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ugu anba bexeysa deeqa wax-barasho.